अनुशा रेष्टुरेन्टको फसाईदिने धम्की र श्रम शोषण किन ? – Saurahaonline.com
अनुशा रेष्टुरेन्टको फसाईदिने धम्की र श्रम शोषण किन ?
चितवन : भरतपुरको मुटु चितवन माविको सटरमा रहेको एक रेष्टुरेन्टले लामो समयदेखि श्रम शोषण गर्दै सञ्चालनमा आईरहेको छ । अनुशा पाठकले सञ्चालन गरेको अनुशा रेष्टुरेन्ट यसअघि फाल्सा नाममा सञ्चालन हुदाँ समेत कर्मचारीहरुको श्रम शोषण गरि सञ्चालनमा थियो । भने अहिले नाम परिर्वतन गरि अनुशा रेष्टुरेन्ट हुदाँ समेत श्रम शोषण र धम्काउने गरेको पाईएको छ । जसका कारण धेरै रेष्टुरेन्टका पारखीहरुले सास्ती खेपेका छन् । र रेष्टुरेन्ट धाउने ग्राहक समेत के कारण अनुशा रेष्टुरेन्ट आय अनुसारको आयकर किन तिरदैन् भनेर अचम्मीत छन् । भने सबै विल भ्याटमा खाट्नुपर्ने भए पनि केहि मात्र खाटिएको भेटिएको छ ।
आफुलाई महिला व्यवसायीहरुको रुपमा परिचित गराउदै हिड्ने र महिला च्याम्बर अफ कमर्श चितवनकी अध्यक्ष समेत रहेकी अनुशाको रेष्टुरेन्टले श्रम शोषण गर्दा सबैले प्रश्न समेत उठाउने गरेका छन् । भने कर कार्यालय भरतपुर चितवनले पनि सबै कुरालाई भ्याटको अनिर्वायता नगर्दा प्रश्न उब्जीएको हो ।
उनले राज्यलाई चुनौती दिने गरि त्यहाँ जाने जोकोहीले श्रम शोषण किन ?, एकै दिन १२ घण्टा काम, अनि हप्ता सातै दिन काम किन कर्मचारीले र्गछन् भनेर प्रश्न गर्दा उल्टै थर्ककाएर पठाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनले आफ्नो सौन्र्दयको घमण्ड देखाउदै मेरोमा ठूला भिआईपी आउछन्, थाहा छ, यहाँ कसैले केहि गर्न सक्दैन्, बढी बोलिस् भने प्रहरी लगाएर नराम्रोसगँ फसाईदिन्छुु समेत भनेर धम्काउने गरेको एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने ।
उनले कर्मचारीलाई प्रहरीको नाममा र्तसाएको र डरका कारण उनीहरुले उजुरी गर्न नसकेका कर्मचारीहरुको गुनासो पोख्छन् ।
यति मात्र नभई उनले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनले तोकेको तलब समेत नदिने गरेको र आय कर समेत कम तिर्ने गरेको एक पूर्व कर्मचारीले भने । हामी निकै पिडित छौँ, अनुशाजीको घमण्ड धेरै भो, कर्मचारीको श्रम शोषण त छदैछ, राज्यलाई समेत आय कर नतिरेर चुनौती दिएकी छिन् । उनले आफ्नो आयाकर लुकाउदै आउदाँ समेत कर कार्यालय बेखबर छ ।